10 Iindawo eziPhezulu eziPhezulu kunye neeTennis Fields | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iindawo eziPhezulu eziPhezulu kunye neeTennis Fields
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSpain, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/10/2021)
Uphahla lwezitrato ezidumileyo eParis, okanye phakathi kweentaba zaseScotland okanye iAlps, ezi zezona ndawo zinqwenelekayo zeholide eYurophu. Ngaphezu, la 10 Iindawo eziphezulu ezinamabala e-tennis ziya kukunika amandla ukusuka kumoya wokuqala opholileyo kwaye unyuse umdlalo wakho ukuya kwinqanaba elitsha. Solo okanye izibini ezitshatileyo, uya kuzithanda ezi ndawo mihle kunye neenkundla zabo zentenetya.
1. Indawo egqibeleleyo yokuya eFrance ngeNdawo eNkulu yeTennis: Isikolo iMennisatatlou Tennis
I-French Riviera yenye yeendawo eziphambili zeholide eFrance, ndiyeke iYurophu. Iimbono zeentaba zeAlpine, amachibi aluhlaza, namanxweme anesanti, ngamanyathelo nje ambalwa ukusuka kumhlaba wentenetya waseMouratoglou. Ukujongana noLwandle lweIonia, Le nkundla ye-tennis esemgangathweni yindawo entle yokwenza i-backhand yakho kunye nabanye babaqeqeshi abaphezulu be-tennis eYurophu..
I-Mouratoglou tennis academy yamkela zonke iintlobo zabadlali kuwo onke amanqanaba. Iinkundla zetennis zeMouratoglou zivulekile yonke imihla. Ngexesha lokuhlala kwakho ehotele & resort, Ungabhukisha inkundla yeyure ngosuku. Inkundla yentenetya emangalisayo ye-Mouratoglou yinxalenye yehlabathi eyaziwayo Isikolo iMouratoglou kwaye ndinabanye babadlali beentenetya ababalaseleyo emhlabeni abazilolonga apha kwaye baqhubeka ne-spa yehotele okanye ulwandle ukuze baphumle kwaye baphumle.
2. Indawo emangazayo yeholide e-Italiya kunye neNkundla yeTennis: ISan Pietro Di Positano
Le nkundla intenetya inye kuphela kwiindwendwe zehotele i-Il San Pietro. Inkundla yeTennis yeenkwenkwezi ezintlanu yeetennis inika uLwandle lweMeditera kunye noNxweme oluhle lweAmalfi. Inkundla yentenetya iSan Pietro isePositano, enye ye 10 Iindawo ezininzi ezintle zokutyelela e-Amalfi Coast, kunye ne-Italiya kunjalo.
Ukuya eAmalfi liphupha lomntu wonke. Ulwandle, i Iilali ezintle, ubomi baselwandle, kunye nemibono yeposikhadi enconywe ngamabala amakhulu angaphandle emidlalo kunye nentenetya, Ngaba umntu unokucela ngaphezulu? Ukuba uyadinwa kukuziqhelanisa nomdlalo wakho, ungaya elunxwemeni, okanye uye kuphela ride umkhumbi Kunye Positano omangalisayo.
3. TYeyona ndawo ibalaseleyo yeTennis eNgilane: Intloko, yaseCornwall
Iiqhekeza ezinamatye, Iilwandle ezinesanti, uLwandlekazi lweAtlantic, kunye neendawo zokuhlala zesiNgesi kwi-moorland eluhlaza, ICornwall yenye yezona ndawo zintle zeholide eNgilani. Usingasiqithi elimangalisayo ugqibelele ukuze uphumle kunxweme, kwaye kuhle imisebenzi yangaphandle, Njengentenetya okanye imidlalo yezamanzi.
KwiConwall, ungakhetha kwi 4 iinkundla zentenetya ukudlala umdlalo omkhulu. Umzekelo, Iklabhu yeTenzance Tennis ivulelekile kuzo zonke iindwendwe kunye nabadlali kuwo onke amanqanaba. kunjalo, eyona nkundla intle yentenetya iseHeadland Hotel eNewquay. Ukujongwa kweFistral Beach kunye noLwandlekazi lweAtlantic, i-Headland yihotele entle, ngezixhobo zangaphandle ezintle zokuhlala zisebenza kwiholide yakho kulwandle olumangalisayo lwesiNgesi.
4. Indawo ekuyiwa kuyo kwiTennis ePhambili eSwitzerland: Ibhotwe laseGstaad
Abakhenkethi abaninzi banokuyazi idolophu yaseGstaad njengendawo ebusika ebusika, kodwa yintsomi yasehlotyeni ngokunjalo. the Swiss Alps ziyamangalisa entwasahlobo, ngeemeko zemozulu ezintle zokuhamba intaba, okujikeleza, nomdlalo wentenetya. IGstaad yindawo emangalisayo yeholide esebenzayo eSwitzerland, kunye nemibono evuyisayo kunye nomoya omtsha we-alpine kwindalo eya kukhulisa amanqanaba akho amandla.
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, IGstaad yindawo ephezulu yeholide yentenetya kwiiAlps zaseSwitzerland. Ukusuka kwiinkundla zentenetya eneenkwenkwezi ezi-5 e-Gstaad Palace resort hotele ukuya eSwitzerland Open J. Ibala lentenetya leSafra Sarasin, kunye neziko lezemidlalo leklabhu yeGstaad, ukhetho luxhomekeke kuwe, izimvo zeAlpine ziya kuba zilindile kuyo yonke inkundla ukuba ziqhelanise nokuhamba kwakho nabanye babadlali beentenetya abalungileyo kwihlabathi.
5. Dlala iTennis echibini Geneva, Swizalend
USerene, luhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka, ubuhle bendalo obumangalisayo, ILake Geneva yindawo yeholide yomlingo. Indawo yeAlpine ngasemva itsala iindwendwe unyaka wonke, kwimpelaveki enkulu yokuskiya, okanye ukuphumla kweholide yasentwasahlobo. Apha, ungakhetha ukunyuka intaba kwiinduli zeAlpine okanye ukuphumla ngaselwandle, ukusuka kuhlala usebenza okanye ukuphola, ngolunye uhlobo, ukhetha kuya kukwenza uzive usempilweni kwaye unamandla.
Kuba iLake Geneva yeyona ndawo ifanelekileyo yolonwabo lwangaphandle, iinkundla zentenetya apha zongeza kumtsalane kwaye zitsale abadlali beentenetya kwihlabathi liphela. Iihotele kunye neeholide apha zinika inkundla yentenetya emangalisayo, Ngeempelaveki banokonwabela ukungatshati okanye izibini’ umdlalo kwenye yeeklabhu zentenetya eLake Geneva. Le gem yaseSwitzerland yamkela abadlali kuwo onke amanqanaba nakulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
6. Iindawo eziPhezulu eziPhezulu kunye neeTennis Fields: Iholide yeTennis eParis
Ubungazi ukuba ikomkhulu le-chic kunye nothando lwehlabathi lineenkundla zentenetya ezigcinwe kakuhle eYurophu. Elinye lala mabala lifihlwe kwi-arrondissement ye-12, Paris’ iklabhu yentenetya esembindini. Ukusukela iklabhu ifihliwe kwisitalato esidala saseParis, le nkundla yentenetya yale mihla iguqulwe yayinkundla enkulu yentenetya isuka esitalini. Ukuba ukufumanisa kunzima ukukholelwa yiza uzibonele, njengoko le kilabhu yentenetya ivulelekile kuye wonke umntu.
Kuba wonke umntu uphupha ngokuza eParis, kwaye abaninzi bazalisekisa iphupha labo lobomi elide lokuya eParis okanye ukuhamba ngokusisigxina, isixeko siphezulu kakhulu. Ke ngoko ayimangalisi into yokuba amanye amaziko odumileyo eParis anyukela eluphahleni. Kukwenzeka oku nakwiinkundla zentenetya, ngelixa kumazwe amaninzi la ngamabala angaphandle, e Paris, unokuziqhelanisa nokuhamba kwakho umphezulu wesitishi sikaloliwe, kwiAtlantic Garden, ngeembono zeTour Montparnasse.
7. Dlala iTennis kwiPikes Hotel Ibiza
Isiqithi saseSpain sidume ngokubulela kumaqela amnandi, iihotele kuceba, namanxweme. Uya kumangaliswa kukwazi ukuba i-Ibiza inayo ezona mbono ziphefumlayo e Spain. Isiqithi esinamatye, iilwandle zegolide, kwaye ulwandle oluqhelekileyo lwenza umfanekiso owenza ukuba wonke umntu alibale ngokudanisa ubusuku bonke. kunokuba, ziphuma nelanga, ukwamkela olunye usuku olukhulu eIbiza.
Ngaphezu, Isiqithi esikhulu saseSpain esingaphandle senza isiqithi sibe yindawo efanelekileyo yeholide esebenzayo. Iihotele zibonelela ngezixhobo ezikhulu zemidlalo, njengeenkundla zentenetya ezimnandi. Enye yezona ndawo zibalaseleyo zomdlalo wentenetya wedwa yinkundla epinki yePikes yehotele. Le nkundla yentenetya imnandi ijonge ulwandle ngeenduli eziluhlaza macala onke kunye nesibhakabhaka esiluhlaza ngaphezulu. Zigqibelele ii-singles, okanye iphindwe kabini, ukuba ungumthandi wentenetya, ke iiPikes eIbiza kufuneka.
8. Isiqithi seTenuta Delle Ripalte Elba, Tuscany
Zimbalwa kakhulu iindawo zokuhlala iholide e-Elba Island azinayo inkundla yentenetya. Isiqithi i-Elba eTuscany siselwandle, ecaleni kweendlela zesidiliya kunye neendawo zokuhlala zase-Italiya, kodwa ndiphupha nje. Isiqithi i-Elba yenye yezona ndawo ziphakamileyo ze-snorkeling eYurophu, kwaye uya kuvuma wakuba ungene ngaphantsi kwanaphambili, Ngelixa uthande ezona ziqithi zinkulu e-Itali.
ngoko ke, Isiqithi i-Elba yindawo entle yeholide yangaphandle. Ukongeza elwandle, ungadlala wedwa okanye ukhanyise isibonelelo samandla akho kwenye yeendawo zokutyela eziphezulu’ iinkundla zentenetya. Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, yonke indawo yokuhlala eholide e-Elba inikezela ngeenkundla zabucala zetennis, amadama okudada, okanye iilwandle zabucala. Xa ungatsiba ukusuka enkundleni uye elwandle ngenyathelo elinye, uphila ubomi obulungileyo, Ngokuqinisekile.
9. Iindawo eziPhezulu eziPhezulu kunye neeTennis Fields: Ikhefu leTennis eScotland
Iinqaba, izindlu ezisemaphandleni, Uhlobo lwaseScotland lwamawa kunye neenkomo, Ukuya eScotland kubuyela kumaxesha eembaleki kunye neentsomi. Ngelixa izindlu zendlu ezifulelwe ngengca kunye neenqaba ezintle azichukunyiswanga lixesha ngaphakathi, oluhlaza olukhulu ngaphandle luhlalisa ngokupheleleyo abahambi namhlanje. Ukusuka kumadama okuqubha ukuya kumabala etenisi, Zonke iinkcukacha zenzelwe ukubonelela iindwendwe ngazo zonke izinto abazifunayo kude nekhaya.
ke, ukuba uyawuthanda umdlalo wentenetya, okanye ukunyuka intaba ukuya kwiindawo ezintle zasemaphandleni, IScotland yindawo entle. Amagama awazukudlulisa ngokupheleleyo amava eeholide eScotland ade azibonele ubuhle. Xa ukubo buqaqawuli bendalo, uya kugcina yonke imizuzu yolonwabo lwangaphandle kunye nokuphumla.
10. Iholide yeTennis kwi Salzkammergut Ostriya
Ungabhala umbongo ngolwandle, ubukele ukutshona kwelanga, kunye noStrudel. Kwelinye icala, ungathatha uloliwe we-Schafberg uye eLake Wolfgang eSalzburg. Ummandla wechibi laseSalzburg lihle ngendlela emangalisayo kwaye yindawo entle yeholide kwindalo. Ukujonga iLake, Umhlaba wamadlelo weAlpine, indlela yokuhamba ngokuhamba phakathi kweSt Gilgen kunye neSt Wolfgang ziindlela ezoyikekayo zokuvuselela amandla akho.
Ngelixa uninzi lweendwendwe luza echibini laseWolfgang ukuza kuphumla, eneneni yindawo entle esebenzayo yokuchitha iholide. Ngaphandle kwentaba enkulu, ungayenza, Ummandla wase-Austrian uyamangalisa kubathandi be-tennis. Iihotele eSalzkammergut zineenkundla zentenetya ezimangalisayo ezinemibono yealpine kunye neyechibi. ke, ukuba iphupha lakho lobomi obude yiholide yentenetya eOstriya, I-Salzkammergut yeyona ndawo ifanelekileyo.
Apha Gcina A Isitimela, siya konwaba ukukunceda ucwangcise iholide esebenzayo. le 10 Iindawo eziphezulu zinemibono emihle kunye neendawo zentenetya ezimangalisayo. ke, unokuziqhelanisa nomdlalo wakho wedwa okanye umdlalo ngokuchasene nabahlobo bakho, ukudala iinkumbulo ezimnandi kwiholide yakho entle.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo ezi-10 eziPhezulu eziPhezulu ezineeTennis Fields" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)